Poda Island | မမွငျရသောခရီးစဉ်ထိုင်း
ထိုနေ့၏အကောင်းဆုံးကာလ : 8.00 သို့ 15.00 နာရီ.
အဲဒီမှာရရှိရန်မည်သို့ : From Ao Nang, there are long-tailed boats in service to Poda lslands all day long. A round trip costs 300 baht each, foratrip of about half an hour. Boats can also be hired exclusively at 2,200 bath
Noppharat Thara သဲသောင်ပြင်
5 အသုံးပြုသူများသည် အွန်လိုင်း